Jenn paakandiudza maitiro, ndakashatirwa chaizvo. Kutanga, kusanzwisisika kwemumwe munhu papuratifomu iyo inotengesa uye inotengesa data rayo pachena zvinosemesa. Chechipiri, iko kuita kwakagamuchirwa naJenn kwaisanzwisisika. Zvisinei nenyasha dzaJenn, kuzvininipisa uye hunyanzvi… vanhu vakamutevera vakabva vatanga kufunga kuti zvinyorwa zvacho zvaizoshandiswa mukuipa.
Iko kufungidzira kwaive kuti izvi zvinyorwa zvaive zveSAMP kuburitsa kwevanhu. Hongu… mushambadzi ane ruzivo nesangano rinoona nezvekurukurirano yeemail, vanobatsirana pane email kushambadza chikuva, uye ine hukama hwakakosha ne kuendesa chikuva… Neimwe nzira yaizofunga kuti ipfungwa yakanaka kutanga mabhizimusi ekutaurisa.
Pandakanga ndiri muindasitiri yekutumira tsamba, isu takatenga zvinyorwa zvisina kumira. Heck, imwe yemaitiro anoshamisa akaitwa nemushandirapamwe waVaObama yaive yekutenga mamirioni ezvinyorwa zvemunhu kuti aite zvirongwa zvekusvitsa munharaunda kwavanoziva ... zvichimutungamira kurova Hillary Clinton (aive muridzi weDemocratic database) ndokutungamira sarudzo.
Kuchenesa Dhata inogona kukuchengetedza kubva pamablacklist, kuwedzera yako inbox kuiswa, kukubatsira iwe kudzivisa zvisina kuchena mafirita, uye nekuvandudza kwese kuendesa. Dhata rinokwegura - kunyanya email email kero uko kune yakakwira mari. Kutenga zvinyorwa zvakagadziridzwa kana kuchenesa zvinyorwa zvako zvazvino inogona kutyaira kuvandudzwa kukuru pachena, tinya-kuburikidza nemitengo, uye shanduko kune yako email kushambadzira.
Profile Analysis - kuongororwa kwevatengi uye kuunganidzwa kwedata kwakanaka, asi data append inogona kukupa iwe ruzivo rwese bhizinesi rako rinoda kubatsira kubatsira kunzwisisa avo vanhu kana mabhizinesi auri kutoita nawo bhizinesi. Huwandu hwevanhu uye firmographics inogona kukubatsira kuti unzwisise maindasitiri uye jogirafi iwe yauri kusvika (kana kwete), kukubatsira iwe kugadzira zvakanangwa marongero ezvemukati, uye kukubatsira iwe kuona nzira dzakashambadza dzekushambadzira kuti uwane meseji chaiyo kumunhu chaiye.
Bhizinesi Nyowani - unonzwisisa here kupinda kwako mumusika? Pane mabhizinesi matsva kunze uko kana tarisiro nyowani kunze uko iwe yaunofanirwa kushambadzira kwairi? Nyowani mabhizinesi zvinyorwa ndeyangu mugodhi kune akawanda maindasitiri! Kwete yeSAMPING, asi yekutsvaga uye kuvaka hukama navo. Kana iwe uri agency inopa yekumaka uye dhizaini masevhisi, ndiani zvirinani kushambadzira kune pane runyorwa rwemabhizinesi achangoshandisa uye akagamuchira avo marezinesi ebhizinesi. Ndezvipi zvimwe zvaungavawana vasina dhata?
Wakambotenga yakanangwa dhata kune rako bhizinesi? Ini ndashanda toni yemabhizinesi, ndakashanda mudhatabhesi uye nekushambadzira kwakananga, uye ikozvino online. Isu tinonyatso ziva kuti mvumo-yakavakirwa, inbound kushambadzira kuedza kunoitisa zvisingaite bhizinesi mhedzisiro kumabhizinesi. Asi isu hatisi vasingazivi nezvekuti iro rakatengwa data rinogona zvakare kubatsira kuongorora, kuongorora, kugadzirisa uye tarisa zvirinani kutengesa uye kushambadzira kuedza. Iko kudzoka kukuru pane rakatengwa data!